Juventus oo dalab rasmi ah ka gudbisay Keita Balde – Gool FM
Juventus oo dalab rasmi ah ka gudbisay Keita Balde
(Torino) 27 Luulyo 2017. Juventus ayaa la warinayaa inay dalab 20 milyan oo euro ka gudbisay xiddiga Lazio ee Keita Balde kaddib markii ay Inter Milan isku dayday inay laacibkeeda Eder qeyb uga dhigto dalab isdhaafsi ah.
Agaasimaha Bianconeri Beppe Marotta ayaa u xaqiijiyay Mediaset Premium inuu qorshe rasmi ah uu ku doonayo Keita u gudbiyay Lazio.
Laacibka reer Senegal ayaa ka dhici doona qandaraaskiisa bisha June ee 2018 wuuna diiday inuu saxiixo heshiis cusub uu ku sii joogayo Stadio Olimpico.
Sida uu sheegayo Sky Sport Italia, dalabka miiska saaran waa 25 milyan oo euro midka ay Lazio dooneysana waa 25 milyan.
Dhanka kale, Sportitalia ayaa sheeganaya in Inter Milan ay isku dayday inay Eder qeyb uga dhigto heshiiska isdhaafsiga ee Keita, laakiin laacibka reer Talyaani ee asal ahaanta ka soo jeeda Brazil ayaa diiday sheekadaa.
Mourinho: In aan Real baryo ayaan ku qasbanaaday si aan uga soo tago
Conte oo sheegay in Morata uusan ahayn bartilmeedkiisa balse uu rabay dhaliyahan....?